Obodo Ninive nke Asiria, Ihe Ndị Izrel Na-arụbichi n’Elu Ụlọ Ha | Ị̀ Maara?
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Guarani Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Korean Latvian Lithuanian Luo Malagasy Norwegian Nzema Oromo Polish Portuguese Quechua (Bolivia) Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Tahitian Thai Tigrinya Tsonga Turkish Twi Tzotzil Ukrainian Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
Gịnị mere e ji kpọọ obodo Ninive oge ochie “obodo na-awụfu ọbara”?
Ihe a tụrụ atụ ná mgbidi nke gosiri ebe ndị agha bu isi ndị iro ha na-edokọta otu ebe
Ninive bụ isi obodo nke alaeze Asiria. Ọ bụ nnukwu obodo nke ọmarịcha obí eze na ụlọ arụsị dị iche iche dị na ya. Okporo ámá ya sara mbara, e wusikwara mgbidi e ji gbaa ya gburugburu ike. Otu onye amụma Hibru aha ya bụ Nehọm kpọrọ obodo a “obodo na-awụfu ọbara.”—Nehọm 3:1.
Ihe a Nehọm kpọrọ obodo a bụ ihe ọ bụ n’eziokwu n’ihi na ihe ndị a tụrụ atụ n’obodo Ninive n’obí eze Asiria, bụ́ Senakerib, gosiri na obi fere ndị Asiria azụ. Otu n’ime ihe ndị ahụ a tụrụ atụ gosiri ebe ndị Asiria jigidere otu onye mkpọrọ n’ala ma na-adọpụta ya ire n’ọnụ. Ihe ndị e dere na nkume kwuru na ndị Asiria na-amanye ụdọ ná nkò ma were nkò ahụ konye n’imi ma ọ bụ n’egbugbere ọnụ nke ndị ha ji eji ma jirizie ụdọ ahụ dọrọ ha na-aga. A na-ejide ndị eze gbupụ ha isi ma were isi ha nyawa ndị ozi ha e ji eji n’olu.
Otu ọkà mmụta n’ihe gbasara ndị Asiria oge ochie nke aha ya bụ Archibald Henry Sayce kọrọ otú ndị Asiria si emekpọ obodo ha meriri ọnụ. Ọ sịrị: “Ebe ọ bụla ọchịagha ha lụrụ agha merie, a na-edokọta isi ndị o gburu egbu n’otu ebe; a na-akpọ ụmụ okoro na ụmụ agbọghọ ọkụ ná ndụ ma ọ bụkwanụ hapụ ha ndụ ka e mee ha nke ka njọ. A na-akpọgide ndị ikom n’osisi, gbaa ha akpụkpọ ná ndụ, rụkpọọ ha anya, ma ọ bụ gbupụ ha ụkwụ na aka ma chapụ ha ntị na imi.”
Gịnị mere ndị Juu ji arụ ihe nrụbichi, ma ọ bụ obere mgbidi, gburugburu elu ụlọ ha?
Chineke nyere ndị Juu iwu, sị: “Ọ bụrụ na ị na-ewu ụlọ ọhụrụ, rụnye ihe nrụbichi n’elu ụlọ gị, ka i wee ghara ime ka ikpe ọbara ma ụlọ gị n’ihi na mmadụ nwere ike isi na ya dapụ.” (Diuterọnọmi 22:8) Ịrụ obere mgbidi a n’elu ụlọ ha dị ezigbo mkpa n’ihi na ndị Juu oge ochie na-anọkarị n’elu ụlọ eme ọtụtụ ihe.
Elu ụlọ ndị Juu na-adịkarị larịị. Ha na-anọkarị ebe ahụ anyaratụ anwụ, anara ikuku, ma ọ bụ rụọ ọrụ ndị ọzọ a na-arụ n’ụlọ. Ebe ahụ na-atọkwa ha ụtọ ịnọ na ya ehi ụra n’oge ọkọchị. (1 Samuel 9:26) Onye ọrụ ubi na-anọ n’elu ụlọ agba ọka ndị ọ ghọtara n’ubi n’anwụ tupu ya egwerie ha ma ọ bụkwanụ nọrọ na ya gbaa mkpụrụ vaịn ya na mkpụrụ fig ya n’anwụ.—Jọshụa 2:6.
A na-anọkwa n’elu ụlọ efe Chineke ma ọ bụkwanụ arụsị. (Nehemaya 8:16-18; Jeremaya 19:13) Pita onyeozi gbagooro n’elu ụlọ n’otu ehihie ịga kpee ekpere. (Ọrụ Ndịozi 10:9-16) Ọ bụrụ na osisi vaịn toro n’elu ụlọ ahụ ma ọ bụ na a tụrụ ya igu nkwụ nke mere ka e nwee ndò na ya, elu ụlọ ahụ na-adị mma ịnọ na ya zuru ike.
Otu akwụkwọ nke kọrọ banyere mba Izrel kwuru na ndị Izrel na-enwe steepụ ma ọ bụ ubube ha ji arịgo n’elu ụlọ ha. Steepụ ahụ ma ọ bụ ubube ahụ “na-adị n’èzí, n’ogige ụlọ ha.” N’ihi ya, onye bi n’ụlọ nwere ike isi n’elu ụlọ rịtuo n’ebughị ụzọ banye n’ime ụlọ. Nke a na-eme ka anyị ghọta ihe mere Jizọs ji gwa ndị na-eso ụzọ ya “ka onye nọ n’elu ụlọ ghara ịrịdata iburu ngwongwo n’ụlọ ya” mgbe a na-abịa ibibi obodo ha, kama ka ọ gbapụ ngwa ngwa.—Matiu 24:17.